UPDATE: Galmudug oo war ka soo saartay dagaal maanta ka dhacay Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Galmudug oo war ka soo saartay dagaal maanta ka dhacay Dhuusamareeb
UPDATE: Galmudug oo war ka soo saartay dagaal maanta ka dhacay Dhuusamareeb
Dhuuusamareeb (Halqaran.com) – Wasaaradda amniga dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ka hadashay dagaal Arbacadii maanta Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka ku dhexmaray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulkaas.
Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah, lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dagaalkaasi ka dhashay.
Ciidamada Militariga ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa kala dhex galay labadii Ciidan ee halkaasi ku dagaalamay, waxaana xaaladda ay tahay mid degan.
Si kastaba, dagaalkii maanta ayaa wuxuu ka dhashay Bar koontarool oo Ciidamada Haramcad maamulaan oo dhawr mar laga celiyay Saraakiil ka tirsan Nabad Suggifa Magaalada Dhuusamareeb ku sugan.
Ciidamo kawada tirsan dowladda